Ebumnuche 10 kpatara saịtị gị na-efu ọkwa ndụ ... na ihe ị ga-eme | Martech Zone
10 Mere na saịtị gị na-efu Organic… na ihe ị ga-eme
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike na-efunahụ ya visibiliti nyocha.
Mbugharị na ngalaba ọhụrụ - Ọ bụ ezie na Google na-enye ụzọ iji mee ka ha mata na ị kwagara na ngalaba ọhụrụ site na Search Console, a ka nwere esemokwu iji hụ na ọ bụla backlink ọ bụla na-edozi ezigbo URL na ngalaba ọhụrụ gị karịa ịchọta peeji nke (404). .
Ntinye ikikere - Ahụla m ọtụtụ oge nke ndị mmadụ na-etinye isiokwu ọhụrụ, plugins, ma ọ bụ na-eme mgbanwe CMS ndị ọzọ na-agbanwe n'emeghị ntọala na igbochi saịtị ha ka ha wee gbasaa.
Metadata ọjọọ - Nchọgharị ọchụchọ na-ahụ metadata dị ka aha na nkọwa peeji. M na-ahụkarị mbipụta ebe mkpado aha, meta aha mkpado, nkọwa na-adịghị mma biju na search engine ahụ redundant peeji nke… ya mere ha naanị index ụfọdụ n'ime ha.
Nzaghachi ekwentị - Ekwentị na-achịkwa ọtụtụ arịrịọ ọchụchọ organic, yabụ saịtị nke anaghị arụ ọrụ kachasị nwere ike ịta ahụhụ. Gbakwunye ikike AMP na saịtị gị nwekwara ike melite ike gị ịchọta na nyocha ekwentị. Igwe ọchụchọ ahụ na-agbanwekwa nkọwa ha banyere nzaghachi ekwentị dịka nchọgharị mkpanaka amalitela.
Gbanwee na nhazi peeji - Ihe dị na peeji nke SEO dị ezigbo mma na mkpa ha - site na aha na isiokwu, iji obi ike / mesie ya ike, gaa na mgbasa ozi na mkpado alt… ma ọ bụrụ na ị gbanwee usoro nke ibe gị ma hazigharịa ihe ndị dị mkpa, ọ ga-agbanwe etu igwe crawler si ele ya anya ọdịnaya gị ma ị nwere ike tufuo ogo maka ibe ahụ. Search engines nwekwara ike gbanwee mkpa nke na peeji nke ọcha.
Gbanwee na ewu ewu - Mgbe ụfọdụ, saịtị nwere ọtụtụ ikike ngalaba na-akwụsị ijikọ gị n'ihi na ha megharịrị saịtị ha ma hapụ akụkọ gbasara gị. You nyochara onye toro gị ma hụ mgbanwe ọ bụla?
Mmụba na mpi - Gị asọmpi nwere ike ime ka ozi ọma ma na-a tọn backlinks na-akwalite ha ogo. Onweghi ihe ị nwere ike ime maka nke a ruo mgbe oke gafere ma ọ bụ ị bulie nkwalite nke ọdịnaya gị.
Isiokwu Trends - you nyochaa Google Trends iji hụ otú ọchụchọ si aga maka isiokwu ị na-ahazi? Ma ọ bụ ezigbo okwu? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na weebụsaịtị m kwuru banyere ya smartphones oge niile, enwere m ike imelite oge ahụ ekwentị mkpanaka ebe ọ bụ na nke a bụ okwu kachasị ike eji eme ihe n'oge a. Enwere m ike ịchọ ịlele usoro oge oge ebe a ma hụ na atụmatụ ọdịnaya m na-aga n'ihu na usoro ọchụchọ.
Onwe-sabotage - Ọ ga - eju gị anya ugboro ole ibe gị na - asọmpi onwe ha na igwe nchọta ihe. Ọ bụrụ na ị na-anwa ide blọgụ kwa ọnwa n'otu isiokwu ahụ, ị ​​na-agbasa ikike gị na backlinks gafee peeji 12 site na njedebe afọ. Gbalia na ichoputa, cheputa, ma dee otu peeji na isiokwu obula - ma debe akwukwo a ka emelitere. Anyị ewepụla saịtị site na ọtụtụ puku peeji ruo ọtụtụ narị peeji - na-ebigharị ndị na-ege ntị nke ọma - ma na-ele okporo ụzọ okporo ụzọ ha okpukpu abụọ.
Kpachara Anya Maka Organic Ranking Resources gị
Ọnụ ọgụgụ ndị m nwere na-arịọ maka enyemaka m na nke a na-eju anya. Iji mee ka ọ ka njọ, ha na-arụtụ aka na ikpo okwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ SEO ha ma na-alụ ọgụ na eziokwu ahụ na akụ ndị ahụ ekwughị amụma ahụ ma ọ bụ na ha enweghị ike inye aka na-agbazi esemokwu ahụ.
Ngwaọrụ SEO - E nwere ọtụtụ mkpọ SEO ngwaọrụ nke ahụ edobebeghị. Anaghị m eji ngwá ọrụ mkpesa ọ bụla gwa m ihe na - adịghị mma - m na-apị saịtị ahụ, mbanye na koodu ahụ, nyochaa ọnọdụ ọ bụla, nyochaa asọmpi ahụ, wee weezie ụzọ iji meziwanye. Google enweghị ike ịdebe Search Console n'ihu mgbanwe algorithm ha… ịkwụsị iche echiche maka ngwa ọrụ ụfọdụ!
SEO genlọ ọrụ - Ike gwụrụ m maka ụlọ ọrụ SEO na ndị ndụmọdụ. N'ezie, Adịghị m ede onwe m dịka onye ndụmọdụ SEO. Mgbe m nyeere ọtụtụ narị ụlọ ọrụ aka na nsogbu ndị a kemgbe ọtụtụ afọ, enwere m ihe ịga nke ọma n'ihi na anaghị m elekwasị anya na mgbanwe algorithm na backlinking… M na-elekwasị anya na ahụmịhe nke ndị ọbịa gị na ebumnuche nke nzukọ gị. Ọ bụrụ n'ịgbalị igwu egwu algorithms, ịgaghị iti puku puku ndị mmepe Google aka na ike kọmpụta ha nwere… tụkwasa m obi. Ọtụtụ SEO ụlọ ọrụ dị adị wuru nke oge na-aga na usoro algorithms na - ọ bụghị naanị anaghị arụ ọrụ - ha ga-emebi ikike ọchụchọ gị longterm. Agencylọ ọrụ ọ bụla nke na-aghọtaghị usoro ahịa gị na azụmaahịa gị agaghị enyere gị aka na atụmatụ SEO gị.
Otu ihe edetu na nke a - ọ bụrụ na ị na-anwa ịkpụcha obere ego nke ngwa ọrụ gị ma ọ bụ mmefu ego ant ga-enweta ihe ị na-akwụ. Nnukwu onye ndụmọdụ nwere ike inyere gị aka ịkwọ ụgbọ okporo ụzọ, setịpụ atụmanya ndị ezi uche dị na ha, nye ndụmọdụ ndụmọdụ n'ahịa karịa injin ọchụchọ ahụ, ma nyere gị aka inweta ezigbo nloghachi na ego gị. Akụ dị ọnụ ala ga-emerụ ọkwa gị ma were ego wee gbaa ọsọ.
Otu esi eme ka onu ogugu gi di elu
Infrastructure - Gbaa mbọ hụ na saịtị gị enweghị nsogbu ọ bụla na - egbochi engines ọchụchọ site na ịkọwapụta ya nke ọma. Nke a pụtara optimizing sistemụ njikwa ọdịnaya gị - tinyere faịlụ robots.txt, saịtị saịtị, arụmọrụ saịtị, mkpado aha, metadata, nhazi peeji, mmeghachi omume mkpanaka, wdg. Ọ dịghị nke ndị a na-egbochi gị ịnye ogo nke ọma (belụsọ na ị na-egbochi engines ọchụchọ site na ịkọwapụta saịtị gị), mana ha na-emerụ gị ahụ site na ịmeghị ka ọ dị mfe iri ari, ndeksi, ma debe ọdịnaya gị nke ọma.
Usoro Ọdịnaya - Nnyocha, nzukọ, na ogo ọdịnaya gị dị oke egwu. Afọ iri gara aga, m na-ekwusara ozi ọma na ugboro ole ọdịnaya iji mepụta ọkwa ka mma. Ugbu a, ana m enye ndụmọdụ megide nke ahụ ma na-ekwusi ike na ndị ahịa na-ewu a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke ahụ sara mbara, na-etinye usoro mgbasa ozi, ọ dịkwa mfe ịnyagharịa. Oge itinyekwu ego na gị nnyocha nyocha, nyocha asọmpi, ahụmahụ onye ọrụ, na ike ha ịchọta ozi ha na-achọ, ka mma ka ọdịnaya gị ga-erepịa ma kesaa. Nke ahụ, n'aka nke ya, ga-ebugharị okporo ụzọ ọzọ. Nwere ike ịnwe ọdịnaya niile ịchọrọ, mana ọ bụrụ na a hazighi ya nke ọma, ị nwere ike na-emerụ usoro nyocha nke aka gị.
Atụmatụ Nkwalite - Iwuli a ukwuu na saịtị na ịtụnanya ọdịnaya bụ ezughị… ị ga-enwe a nkwalite atụmatụ na draịva njikọ azụ gị na saịtị maka search engines ka ọkwá gị elu. Nke a chọrọ nyocha iji chọpụta etu ndị asọmpi gị si dị ogo, ma ị nwere ike itinye akụ ndị ahụ, yana ma ị gaghị enwe ike ị nweta njikọ azụ site na ngalaba ndị ahụ nwere ikike dị ukwuu na ndị na-ege ntị dị mkpa.
Dị ka ihe niile dị na mpaghara ahịa, ọ na-abịakwute ndị mmadụ, usoro, na nyiwe. Jide n'aka na gị na onye na-ahụ maka ịre ahịa dijitalụ na-aghọta akụkụ niile nke njikarịcha njin ọchụchọ yana otu o nwere ike isi metụta ndị ahịa gị na-aga njem njem ahịa. Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe enyemaka, m na-enye ụdị nchịkọta ndị a. Ha na-amalite site na ịkwụ ụgwọ iji kpuchie nyocha - wee nwee njikọ aka kwa ọnwa iji nyere gị aka ịnọgide na-emeziwanye.
Jikọọ na Douglas Karr
Tags: Ọbá akwụkwọ ọdịnayaatụmatụ ọdịnayanhazi ọkwanyocha ọchụchọusoro ochicho chorovisibiliti nyochaAseo ọkachamaraseo na-agba izuseo Mbugharịseo ogoseo ngwaọrụ
DroppTV: Iji AI Mara ma Ree Ngwaahịa na vidiyo
Etu esi atụ, zere, ma belata ọnụego ịhapụ ụgbọ ala dị elu